ကျနော်တို့လိုအပ်အားလုံးဘုရားသခငျ၌ Is — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
ဒီနေရာမှာငါဆာလံအပေါ်တရားကိုဟောမကြာသေးမီကတရားဒေသနာအနေဖြင့်အသံရဲ့ 142. ကြှနျုပျတို့အားလုံးခကျခဲကြိမ်ဖြတ်သန်းသွား, ဒါပေမယ့်ဆာလံပင်အဆိုးရွားဆုံးကာလ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၌ကြှနျုပျတို့လိုသမျှရှာဖွေနိုင်သည်ကိုပြသထားတယ်. အဆိုပါလေးအချက်များဖြစ်ကြသည်:
II ကို. ဘုရားသခငျသညျအမှုရောက်သောကာလ၌အကြှနျုပျတို့၏အကာအကွယ်ဖြစ်ပါသည်
III ကို. ဘုရားသခငျသညျအမှုရောက်သောကာလအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရတနာဖြစ်ပါသည်
Angie • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:39 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Shakinah Smith • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:40 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ချီးမွမ်းခြင်းကိုဘုရားသခငျသညျ! He is everything I need. This message really make me think on the goodness of God and how many times he has gotten me out of situation and tough times. He is always with me and for me. My prayer now is that God will just give me strength to go thru whatever i have to because i know who he is to me.
Anthony Chatmon • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:40 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Kenitra Brockington • သြဂုတ်လ 19, 2013 တွင် 9:40 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
josephwalker • ဒီဇင်ဘာလ 13, 2013 တွင် 1:46 နံနက် • ပြန်ကြားချက်